बलिउड हिरोइन जान्हवी संग फिल्म खेल्न अनमोललाई फेरि बलिउडबाट आयो अफर — Chetana Online
बलिउड हिरोइन जान्हवी संग फिल्म खेल्न अनमोललाई फेरि बलिउडबाट आयो अफर
फागुन १७ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘क्याप्टेन’ ले हल नछाड्दै अभिनेता अनमोल केसी फेरि नयाँ फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट यही चैत २९ गते दर्शक भेट्न तयार छन् ।
यो फिल्मपछि भने उनको पाइपलाइनमा कुनै फिल्म छैन । दैनिक दुईभन्दा बढी फिल्मबाट अफर हुने गरेको भएता पनि उनले नयाँ फिल्म साइन गरेका छैनन् । अब उनी ६ महिना ग्याप लिने सोचमा छ ।
यसबीच, अनमोललाई एक बलिउड फिल्म अफर भएको छ । चैत १ गते प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ का निर्देशक पेमा धोन्डुप अब बलिउड फिल्म निर्देशन गर्ने तयारीमा छन् । उक्त फिल्म उनले अनमोललाई अफर गरेका छन् ।
निकट स्रोतले फिल्मीखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार, अनमोलले फिल्मको कन्सेप्ट एकसरो सुनिसकेका छन् । तर, उनले आफूलाई अहिलेसम्म फिल्म अफर नभएको बताए ।
फिल्मीखबरसँग फोनर्वार्तामा उनले भने- ‘अहिलेसम्म मलाई उहाँ (पेमा) ले फिल्म अफर गर्नुभएको छैन ।’ अनमोल फिल्म गर्न राजी भएको खण्डमा निर्देशक पेमा उनको अपोजिटमा बलिउड अभिनेत्री जान्हवी कपूरलाई लिने सोचमा छन् ।
बलिउड अभिनेता गुशलन ग्रोवरको पनि फिल्ममा अभिनय रहनेछ । फिल्मको लागत १० करोड आसपास हुने स्रोत बताउँछ । हाल फिल्मको स्क्रिप्टमा काम भइरहेको छ ।
अनमोलले फिल्मको कन्सेप्ट रुचाएको स्रोत बताउँछ । तर, उनले फाइनल स्क्रिप्ट मागेका छन् । हिन्दी भाषामा बन्ने फिल्ममा उनलाई निर्माण टिम ७० देखि ८० लाखसम्म पारिश्रमिक दिन तयार छ । उनको निर्देशक पेमासँग भने हालसम्म भेट भएको छैन ।
दुईबीच टिमअप गराउन एक लेखकले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका छन् । हाल फिल्मको गीतमा भारतीय संगीतकार जतिन पण्डितले संगीत भरिरहेका छन् ।
गएको ६ महिना अगाडि पनि अनमोलले एक बलिउड फिल्म साइन गरेको खबर बाहिरिएको थियो । यो कुरा उनी स्वयंले स्वीकार गरेका थिए । तर, उक्त फिल्म बन्ने सम्भावना अब टर्दै गरेको देखिन्छ ।
किनकि, अचेल यो फिल्मलाई लिएर अनमोल मौन छन् । छोटो समयमा नै नेपाली फिल्ममा आफ्नो दबदबा कायम गरेका उनले पुनः बलिउड फिल्मको अफर स्वीकार गर्लान् वा रिजेक्ट ? धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
हजुरबुवाको उमेरका ६८ वर्षे व्यक्तिसंग विवाह गर्दै २६ वर्षे सेलेना गोमेज
चिनियाँ राजदूतका कारण प्रचण्डलाई टेन्सन ! माफी माग्न लगाए
संसदमा शान्ता चौधरीको गर्जन : बालुवाटार खाने कांग्रेस हो कि केपी ओली ?
प्रियासनको पहिलो म्युजिक भिडीयो ‘म गीतहरुमा डुबेर’ सार्वजनिक
चिनियाँ नागरिकले दिसा गर्दा ३ किलो सुन निस्कियो
अन्तरिक्षमा भेटियो राक्षसी भुमरी, ‘कालो छिद्र’अर्थात् ब्ल्याक होल
सुत्केरी भएको दुइदिनमै एसइइ दिन बच्चा सहित पुगिन रोल्पाकी किशोरी
प्रचण्डलाइ फसाउने ठुलै चाल : अमेरिका गएका प्रचण्ड संकटमा, अमेरिकामै पर्यो युद्ध अपराधको उजुरी